जे गर्नु फेसबुकको म्यासेजले गर्यो – Sandes Post
जे गर्नु फेसबुकको म्यासेजले गर्यो
April 6, 2022 4506
कोचिङ’ कक्षाका लागि मंगलबार बिहान घरबाट हिँडेकी उदयपुरको कोसी जनता माध्यमिक विद्यालयकी १६ वर्षीया छात्रा कविता सुनुवारको ह त्या मा उनकै किशोरी साथी र साथीको दाइको संग्लनता देखिएको छ ।
प्रहरीले ह त्या आरोपमा कवितासँगै पढ्दै आएकी ढकाल थरकी १५ वर्षीया छात्रा र उनका दाइ नाता पर्ने १९ वर्षीय विनोद ढकाललाई पक्राउ गरेको छ । कविताको मोबाइल पनि उनकै साथीको घरमा भेटिएको छ ।मंगलबार बिहान करिब साढे ६ बजेको समयमा कविता यशोदा खोलामा मृ’त भेटिएकी थिइन् ।
बिहान साढे ६ बजेको आसपासमा उनलाई भैँसी चराउन जानेहरूले देखेका थिए ।बेलका नगरपालिका–३ की छात्रा कविता कक्षा–१० मा अध्ययनरत थिइन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण साहका अनुसार शरीरमा छाला रो’गको स’मस्या देखिएपछि उनी केही दिनयता बिहानको कोचिङ कक्षामा अनुपस्थित रहँदै आएकी थिइन् ।
विद्यालयमा प्रत्येक दिन बिहान सवा ६ बजेदेखि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको पढाइ हुँदै आएको थियो ।केही दिन कोचिङ कक्षा नआएकी कविता साथीसँग हिजो स्कुल जाने भन्दै निस्किएकी थिइन् । कविताको घर विद्यालयभन्दा तीन किलोमिटरको दूरीमा छ ।
उनी प्रायःजसो पैदल हिँडेरै विद्यालय पुग्ने गरेकी थिइन् ।तर, मंगलबार कविता आफ्नै साथीको योजनामा मा’रिइन् । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, “कवितलाई उनकी साथीले बिहान साढे ४ बजेतिर आज कोचिङ जानुपर्छ भनेर फेसबुकमा म्यासेज गरेकी रहिछिन् ।
उनले हुन्छ भनेपछि साथीसँगै हिँडेर स्कुलतर्फ अगाडि बढिन् । साथीसँग उनको दाइ पनि रहेछन् । उनका दाइले बि’यरको बोतल लुकाएर लगेका रहेछन् । केही पर पुगेपछि कविताको टाउकोमा बि’यरको बोतलले हिर्काएका रहेछन् ।”कवितालाई लिन उनकी साथी घरनजिकै आएकी थिइन् ।
बि’यरको बोतलले हि’र्काएपछि कविता जमिनमा ल’डेको र सो अवस्थामा उनीहरूले टाउकोमा ढुंगा प्र’हार गरेको देखिएको छ ।कवितामाथि आ क्र म ण गरिसकेपछि उनीहरूले घि’सारेर खोलासम्म लगेको र फेरि टा’उकोमा ढुंगा ब’जारेको उनीहरूले बताएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पक्राउ परेका दुवैजनाले ह त्या मा आफ्नो संलग्नता स्वीकार समेत गरिसकेका छन् । कविताको मोबाइल साथीको घरबाट बरामद हुनुले घटना पुष्टि भएको प्रहरी भनाइ छ । यसबाहेक प्रहरीले बि’यरको बो’तलका टुक्रा समेत ब’रामद गरेको छ ।
कवितामाथि आ क्र म ण गर्दा विनोदको शरीरमा समेत चो’ट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । आफूलाई हे’प्ने गरेका कारण कवितामाथि आ क्र म ण को योजना बनाएको उनकी साथीले बताएकी छन् ।अनुसन्धानका क्रममा केही समयअघि म’नमुटाव भएर कविता र उनकी साथीबीच बोलचाल पनि बन्द भएको थियो ।
त्यसपछि कविताकी साथी फेरि बोल्न सुरु गरेकी थिइन् । निम्नवर्गीय परिवारकी कविताका बुवा सामान्य मजदुरीको काम गर्दै आएका छन् ।पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले आज म्याद थपको तयारी गरेको छ । प्रहरीले घटनाबारे प्राविधिक पाटोको समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
Prevघट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको ?
Nextबैशाखदेखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा ?
कतारको HOSPITALITY SERVICES कम्पनीमा नेपाली महिला तथा पुरुष कामदारको माग
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन,चैत्र १५ गते मंगलबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
कांग्रेसलाई जिताउनुस सबैलाई सकिँदैन केहीलाई फ्री भिसा र फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदिन्छु
गायिका समीक्षा अधिकारी जोगी बन्ने (भिडियो सहित)